Somaliland oo diiwan gelinaysa xirfadlayaasha caafimaadka | Baydhabo Online
Goobaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay ayaa si xawli leh ugu sii badanaya deegaanada ay Soomaalida degto, waxaana walaac laga muujinaya arrintaasi oo la sheegay inay saameyn ku yeelan karto caafimaadka dadweynaha qaar ee qaata dawooyinka aanan la hubin tayadooda.
Shacabka qaar ay qabaa in aan si buuxda loogu kalsoonaan karin tayada adeegga caafimaad ee goobaha qaar.
Guddiga mihnadlayaasha caafimaadka ee Somaliland waxay dhawaan go’aamiyeen in lakala hufo guud ahaan bahda ku shaqaysata xirfadda caafimaadka guud ahaan deegannada halkaasi.
Guddoomiyaha guddiga mihnadlayaasha caafimaadka Somaliland, Dhakhtar Axmed Xaashi Nuur ayaa sheegay inay wadaan kormeer ay ku ogaanayaan tayada adeegyada ay bixiyaan goobaha caafimaadka,shaqaalaha iyo sharciga ay ku shaqeeyaan isla markaasna ay diiwaan gelinayaan sii looga shaqeeyo sare u qaadidda caafimaadka shacabka.
Wuxuu ka digay dadka ajaanibta ah sida sharci darrada uga howlgalayo goobaha caafimaadka ee aanan la lahayn khibrad ama sharci aanan ka haysanin wasaaradda caafimaadka.
“Marka hore ninkii dhakhtarka ahaa ayaan ka bilaabnaynaa, marka dambena dawadii ayaan usoo noqonaynaa, Farmasiyada dalka waxay xad dhaafeen” ayu yirii Axmed Xaashi.
Waxaa laga digaya tirada Farmasiyada kusii badanaya guud ahaan deegannada Soomaalida ee aanan bixin dawooyin tayeysan.
“Sharciga Farmasiga wuxuu dhigaya in ugu yaraan Farmasiyada ay isku jiraan ugu yaraan ilaa 150 miitar” ayuu yiri dhakhtar Axmed.
Sida ay sheegtay hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO, ka ganacsiga dawooyinka macmalka ah ee dunida waxaa lagu qiyaasaa inuu gaaray 30 bilyan oo doolar, taas oo saddex goor labo laabantay shantii sanadood ee ugu dambaysay.